Sidee looga falceliyey khudbaddii uu jeediyey FARMAAJO? - BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Sidee looga falceliyey khudbaddii uu jeediyey FARMAAJO?
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) ayaa xalay jeediyey khudbad lama filaan ah, taas oo ay Villa Soomaaliya sii deysay xalay saq-dhexe, waxaana ka dhashay falcelin aad u xoogan.
Dhankiisa xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynuhu is-hilmaansiiyey in uu aag dagaal ka furey madaxtooyada qaranka, isla-markaana uu ka hadlay qabkii iyo gobonimadii fagaarayaasha caalamiga in la soo celiyey.
Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ah ayaa sidoo kale ka falceliyey hadalkii madaxweynaha waqtig ka dhammaaday ee Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo, wuxuuna yiro “Khudbada Farmaajo QUWAAXII aan sheegay soo ma noqon?!.”